China Earthworm peptide စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Huayan
Earthworm peptide သည်သေးငယ်သောမော်လီကျူး peptide ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောမြေကြီးမှအညစ်အကြေးမှပစ်မှတ်ထားထားသောဇီဝအင်ဇိုင်းအစာခြေနည်းပညာဖြင့်ထုတ်ယူသည်။ Earthworm peptide သည်တိရိစ္ဆာန်ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာနှင့်လုံး ၀ စုပ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းကို earthworm isolate protein ၏ enzymatic decomposition ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ပျမ်းမျှမော်လီကျူးအလေးချိန် 1000 DAL ထက်နည်းသောသေးငယ်သည့်မော်လီကျူးပရိုတိန်းသည်ဆေးခန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနှလုံး၊ ဦး နှောက်တွင်းသွေးကြောသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ၎င်းကိုအစားအစာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးများ၊ အလှကုန်များနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ - သေးငယ်သောမော်လီကျူးပရိုတိန်း peptide သည်လျင်မြန်စွာနှင့်လုံး ၀ စုပ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နှလုံး၊ cerebrovascular၊ endocrine နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဦး နှောက် thrombus ကိုကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း။
2. Miocardial infarction ကုသ။
4. အန်ဂျီနာ pectoris, နှောက်ကျက်ရောဂါ, ဆီးချိုရောဂါ, nephrotic syndrome ရောဂါ, အဆုတ်နှလုံးရောဂါနှင့်နက်ရှိုင်းသောသွေးကြော thrombosis ကုသခြင်း
4. ကျန်းမာသောဟိုင်နန်ကျွန်းမှ စတင်၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအရာများကို ရွေးချယ်၍ ကမ္ဘာကြီးကိုဝတ်ပြုပါ။
နောက်တစ်ခု: ကော့ငါးကော်လာဂျင် Peptide